Galaxy Andromeda: astaamaha, asalka iyo qaab -dhismeedka | Saadaasha Hawada
Andromeda waa galaxy ka samaysan nidaamyo xiddig, boodh, iyo gaas, kuwaas oo dhammaantood saameeya cuf -isjiidadka. Waxay dhulka u jirtaa 2,5 milyan oo sano oo iftiin ah waana jirka keliya ee samada ka muuqda oo qaawan oo aan ka tirsanayn Milky Way. Rikoodhkii ugu horreeyay ee galaxyadu wuxuu soo noqday 961, markii xiddig-yahanka reer Faaris ee Al-Suufi uu ku tilmaamay inay tahay koox yar oo daruuro ah oo ku jirta xiddigga Andromeda. Waxay u badan tahay, dadyowga kale ee qadiimiga ah ayaa iyaguna ku guulaystay inay aqoonsadaan.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Galaxyada Andromeda, sifooyinkiisa iyo muhiimadiisa.
2 Sida loo sawiro galaxyada Andromeda
3 Qaab -dhismeedka iyo asalka galaxyada Andromeda
Andromeda waa galaxy aarayo oo qaabkeedu la mid yahay Milky Way -na. Waxay u egtahay sida saxan fidsan oo leh hor -u -socod iyo dhowr gacmood oo muquuno ah badhtamaha. Dhammaan galaxyada ma laha naqshadan. Hubble ayaa u kuurgalay boqolaal iyaga ka mid ah. Jaantuskooda fargeetada ee caanka ah ama taxanaha Hubble oo ilaa maanta la adeegsado, waxay u qaybsan yihiin ellipticals (E), lenticulars (L), iyo spirals (S).
Dhanka kale, galaxies -ka isdaba -joogga ah waxaa loo qaybiyaa laba kooxood, kuwa leh baararka dhexe iyo kuwa aan lahayn baararka dhexe. Waxa hadda la isku raacsan yahay waa kanyagii Milky Way waa galab muquuno ah oo xayndaaban. In kasta oo aanaan dibadda ka arki karin, haddana Andromeda waa galab muquun ah oo fudud ama aan la xakamayn karin Sb, waxaanan halkan ka arki karnaa ku dhawaad.
Aynu aragno astaamaha ugu muhiimsan ee Andromeda:
Waxay leedahay laba geesood
Cabbirkiisu wuxuu la mid yahay kan Milky Way. Andromeda baaxad ahaan uun ka yara weyn, laakiin Milky Way waxay leedahay cufnaan ballaaran iyo arrin mugdi ah.
Waxaa jira dhowr galaxyo dayax -gacmeed oo ku yaal Andromeda kuwaas oo si is -dhexgal ah u dhex gala: galaxyada cufan ee elliptical: M32 iyo M110 iyo galax yar oo muquuninta M33 ah.
Dhexroorkeedu waa 220.000 sano oo iftiin ah.
Waxay qiyaastii laba jeer u dhalaalaysaa sida Milky Way waxayna leedahay bilyan xiddigood.
Ku dhawaad ​​3% tamarta ay soo saarto Andromeda waxay ku taal gobolka infrared, halka Milky Way boqolkiiba boqolkani yahay 50%. Caadi ahaan qiimahani wuxuu la xiriiraa heerka samayska xiddigaha, sidaa darteed wuxuu ku sarreeyaa Milky Way iyo hoose ee Andromeda.
Sida loo sawiro galaxyada Andromeda
Diiwaanka Messier waa liis ka kooban 110 meelood oo samada laga soo bilaabo 1774, kaas oo magaca galaxyada Andromeda ee muuqda ee ku jira xiddigaha isku magaca ah M31. Xusuusnow magacyadan markaad ka raadineyso galaxyada khariidada cirka, maadaama loo adeegsado codsiyo badan oo ku saabsan cilmiga xiddigiska kumbiyuutarrada iyo taleefannada gacanta.
Si aad u aragto Andromeda, way ku habboon tahay in marka hore la helo xiddigga Cassiopeia, kaas oo leh qaab aad u kala duwan xarafka W ama M, iyadoo ku xiran sida aad u eegto. Cassiopeia way fududahay in lagu arko samada, oo Galaxy Andromeda waxay dhex taallaa isaga iyo kooxda Andromeda. Xusuusnow si aad u aragto Milky Way oo indhaha qaawan leh, cirku waa inuu noqdaa mid aad u madow oo aan nal macmal ah agtiisa jirin. Si kastaba ha ahaatee, xitaa habeen cad, Milky Way waxaa laga arki karaa magaalooyinka dadku ku badan yihiin, laakiin ugu yaraan waxaa loo baahan yahay caawinta indho -indheeyaha. Xaaladahan, oval cad oo yar ayaa ka muuqan doona aagga la tilmaamay.
Adigoo adeegsanaya telescope waxaad kala garan kartaa tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan galaxyada sidoo kale waxaad heli kartaa labadeeda galaxis ee wehelka ah.
Waqtiga ugu fiican sanadka si aad u aragto waa:
Waqooyiga Hemisphere: In kasta oo muuqashadu hooseyso sannadka oo dhan, bilaha ugu fiican waa Ogosto iyo Sebtembar.
Qeybta koonfureed: inta u dhaxaysa Oktoobar iyo Disembar.
Ugu dambayntii, waxaa lagu talinayaa in la dhawro inta lagu jiro dayaxa cusub, cirka aad ha u madoobaado oo xidho dhar ku habboon xilliga.
Qaab -dhismeedka iyo asalka galaxyada Andromeda
Qaab -dhismeedka Andromeda wuxuu asal ahaan la mid yahay kan dhammaan galaxyada isqaba:
Nucleus atom ah oo gudaha ku leh dalool madow oo aad u weyn.
Guluubka ku wareegsan bu’da oo ay ka buuxaan xiddigo ayaa horumar ka samaynaya horumarka.
Halo, oo ah baaxad weyn oo baahsan oo ku xeeran qaab dhismeedkii hore loo magacaabay, ayaa ku dhex milma halo dariska Milky Way.
Galaxyada waxay ka soo jeedaan protogalaxies -ka hore ama daruuraha gaaska, waxaana lagu abaabulay wakhti aad u yar ka dib Bangigii weynaa, iyo Bug -weynihii wuxuu abuuray koonka. Intii lagu jiray Big Bang, waxaa la sameeyay walxaha fudud ee hydrogen iyo helium. Sidan, proto-galaxy-ga ugu horreeya waa inuu ka koobnaadaa waxyaabahan.
Marka hore, maaddadu si siman bay u qaybsan tahay, laakiin meelaha qaarkood waxay ku urursataa waxoogaa ka badan kuwa kale. Halkee cufnaanta ayaa ka sareysa, cuf -is -jiidadku wuxuu bilaabaa inuu ficil sameeyo oo wuxuu keenaa in maado badan soo ururaan. Waqti ka dib, foosha cufnaanta ayaa abuurtay protogalaxies. Andromeda waxaa laga yaabaa inay ka dhalatay isku -darka dhowr protogalaxies oo dhacay qiyaastii 10 bilyan oo sano ka hor.
Iyadoo la tixgelinayo in da'da qiyaasta koonka ay tahay 13.700 bilyan oo sano, Andromeda wuxuu sameeyay wax yar ka dib Bangiga Weyn, sida Milky Way oo kale. Intii uu jiray, Andromeda wuxuu nuugay protogalaxies kale iyo galaxies, isagoo ka caawiyay sameynta qaabkeeda hadda. Intaas waxaa sii dheer, heerkooda xiddig -dhisiddu sidoo kale way is -beddeshay waqti ka dib, maxaa yeelay heerka samaynta xiddiguhu wuu kordhaa inta lagu jiro hababkan.
Doorsoomayaasha Cepheid waa xiddigo aad u dhalaalaya, oo aad uga iftiima qorraxda, si iyaga xitaa meel fog looga arki karo. Polaris ama Pole Star waa tusaalaha xiddigaha doorsooma ee Cepheid. Dabeecaddooda ayaa ah inay mari doonaan ballaarinta iyo foosha xilliyeedka, taas oo ay dhalaalintoodu marmar sii kordhayso oo hoos u dhacayso. Taasi waa sababta loogu yeero xiddigaha garaaca.
Marka laba laydh oo si siman u iftiimaya meel fog laga arko habeenka, waxaa laga yaabaa inay leeyihiin dhalaal isku mid ah, laakiin mid ka mid ah ilaha iftiinka ayaa laga yaabaa inuu yara yaraado oo isku soo dhawaado, sidaa darteed isku ekaadaan.
Baaxadda xiddigtu leedahay waxay la xiriirtaa iftiinkeeda: waxaa iska cad in baaxadda weyni ay sii weynaato iftiinkeedu. Taas bedelkeeda, farqiga u dhexeeya baaxadda muuqata iyo baaxadda gudaha waxay la xiriirtaa masaafada isha.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto galaxyada Andromeda iyo sifooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Galaxy Andromeda